Isizathu sokuBomi obuNgcono kunye nobuSempilweni (thina siphuhlisa imakethi yabasetyhini)
ngu admin nge-20-04-20
I-Shapewear ibonelela ngeMemoriyamu eKhawulezileyo Ukuncwina Ngaba wakhe wawuncancisa esiswini sakho ngaphambili kwaye wawubamba? Ewe, iimpahla zokumila zinokubonelela ngokukhangeleka okwehlayo kwangoko ngaphandle kokuba uchukunyiswe sisisu sakho. Isizathu kukuba iingubo ezimile kakuhle zilinganisa isiphumo sokuncanca ...
I-Shapewear namhlanje kukude kude neengubo zethu zoomama bethu ababesanxiba. Kule mihla banxibile kwaye babhiyozelwa ziinkwenkwezi ezininzi kunye neelenbhile kwaye ziyinyani ngokuqinisekileyo kwigumbi ngalinye.kodwa kutheni? Kutheni sinxiba impahla emilo? Ukujonga okuGqamileyo: Nokuba kungumthendeleko, unxibe ngokwaseburhulumenteni okanye unxibe ngokudibeneyo, iimpahla zokuma ...
Ukuba awuthandi ukuthintelwa xa usebenzisa i-bras eqhelekileyo, iimpahla zakho zinqongophele, imitya iyaphuma eqongeni kwaye nokuba ibanjiwe kakuhle ngasemva, uhlala usazi malunga nokuwa okanye ukusuka endaweni. Kwakhona, ibhendi eqinileyo okanye i-underwire ingakushiya ngemivimbo enzulu. ...